Read more about मोडल
Read more about जेब्राक्रसमा उभिएर
१) अज्ञात लेखक
Read more about पाण्डुलिपि
शहीदले बिर्सेको गाउँ
"आमा, भित्र को हुनुहुन्छ ?"
"छोरा आइस्, बाबू !" बुढी आमा भित्रबाट बोलिन् । असी हिउँद काटेकी बूढी आमा हातमा मलिन टुकी लिएर बाहिर आइन् । नियालेर हेरिन् । बरर आँसु झारेर भनिन् -"म त छोरो आएछ भनेर झुक्किएँ !"
"बास पाइन्छ आमा ?"
Read more about शहीदले बिर्सेको गाउँ
आधुनिक शहरको एक कुनामा मानिसहरुको भीड बढ्दो थियो। भीडका मानिसहरु बडो आश्चर्य मान्दै त्यहाँ देखिएको दृष्यको मजा थिए । त्यहाँ भीड जम्मा गरेको थियो एक यन्त्रमानवले । दुरुस्त मानव झैं लाग्ने त्यस यन्त्रमानवले पूरै मानव हाउ-भाउको नक्कल गर्दथ्यो । बेलाबेलामा अनौठो आवाज निकालेर मानिसहरुलाई बोलाउँथ्यो । भीडका मानिसहरु त्यसलाई विज्ञानको उच्चतम आविष्कार ठानी आश्चर्यचकित भएर हेरिरहेका थिए ।
Read more about यन्त्रवत्
Read more about खीर/ इन्द्रबहादुर राई
उमेरको झण्डैझण्डै पचास वर्ष छुनेबेलामा सुब्बासाबलाई कुर्कुरे वैंश आएजस्तो भइरहेको छ। उनको खास नाम र थर के हो भन्ने पनि धेरैलाई त थाहा छैन। जागीरमा सुब्बा भएको कारण उनलाई साथीहरु सबैले सुब्बा सुब्बा भन्दा भन्दै अहिले त उनलाई नै पनि आफ्नो नाम त्यही जस्तो लाग्न थालेको छ।
रातभरि पनि उनी राम्ररी निदाउन सकेनन्। निदाउन निदाउन खोज्यो, सपनामा त्यही कुरा देखेर झसंग भएर ब्यूँझिहाल्थे सुब्बासाब। आज बिहानैदेखि सुब्बासाब उत्साहित छन्। उत्साहित मात्र होइन, उत्तेजित पनि भन्नुपर्ला। अनि अलिअलि डर पनि छ उनलाई।
Read more about मिडनाइट हट
Read more about घर
Read more about भन्सारको जागिर
Read more about देउकी